Mari-nehupfumi, 28 Chivabvu 2019
Nhengo yeMDC mudunhu reNorth America, Doctor Gadziro Gwekerere, vanoti bato ravo rakatora danho rekuve kuZimExpo kuitira kuti vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva mumatunhu akasiyana siyana.
Mutumbi waVaDumiso Dabengwa Wotarisirwa Munyika neSvondo
Mutumbi wemutungamiri webato rinopikisa reZapu, VaDumiso Dabengwa, uri kutarisirwa munyika neSvondo kubva kuNairobi, Kenya uko vakashaikira vachibva kuIndia kwavairapwa chirwere chechiropa.
ZESA Yoyambira Kuti Nguva Dzekudzimwa kweMagetsi Dzinogona Kungoshanduka
Sangano rinomirira vagari vemuHarare, Harare Residents Trust, rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi ye Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji.
VaChamisa Vochema VaDabengwa Vachiti Vaive Gamba Chairo
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change VaNelson Chamisa vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutungamiri webato reZAPU VaDumiso Dabengwa avo vakashaya kuNairobi, Kenya vachibva kunorapwa kuIndia.
Vakawanda Votambura Zvikuru kuMaruwa
Kuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kunonzi nevamwe vagari vekumaruwa kuri kuwedzerawo matambudziko avo, sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro kudarika mitengo yezvitoro zvemumadhorobha.